Tennis -ka Tennis -ka USA iyo Huteelka Blossom ee Houston Hadda Ku Biir Ciidan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hoteelada & Dalxiisyada » Tennis -ka Tennis -ka USA iyo Huteelka Blossom ee Houston Hadda Ku Biir Ciidan
Jebinta Wararka Safarka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirarka • News • Sports • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
USA Table Tennis (USATT) iyo Blossom Holding Group ayaa maanta ku dhawaaqay in Blossom Hotel Houston loo magacaabay Hoteelka Rasmiga ah ee USATT. Sida waafaqsan heshiiska, lebiska Kooxda Miiska Qaranka ee Mareykanka ayaa soo bandhigi doona astaanta Blossom Hotel Houston, huteel qaali ah oo qaali ah oo qaali ah oo ku yaal badhtamaha magaalada Houston.
Huteelka Blossom ee Houston wuxuu sugayaa inuu siiyo ciyaartooyda Tennis -ka Mareykanka ee Tennis -ka iyo taageerayaasha waayo -aragnimo soo -dhaweyn leh oo Houston ah.
Waxay u jirtaa masaafo u jirta degmada matxafka caanka ah waxaana ku hareereysan dukaamaysiga, cuntada iyo meelaha madadaalada.
Hoteelka Blossom Houston waxaa laga yaabaa inuu ugu wanaagsan yahay inuu dib ugu celiyo bulshada Houston.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan soo dhoweyno Blossom Hotel Houston galay qoyska USATT, ”ayay tiri Sarkaalka Sare ee Maamulka Virginia Sung. “Ma aha oo kaliya hudheelka mid qurux badan, oo ah hanti casri ah oo leh waxyaabo naqshad leh oo cajiib ah, laakiin sidoo kale kooxda lahaanshaha ayaa muujiyey ka go’an tahay hagaajinta duruufaha dadka ku nool bulshada Houston. Kooxda Qaranka Mareykanka waxay ku faani doonaan inay xirtaan astaanta Blossom dhammaan dhacdooyinka rasmiga ah. ”
Maamulaha Hoteelka Blossom Houston, Charlie Wang ayaa yiri "Sharaf weyn bay noo tahay inaan iskaashi la yeelano USA Tennis -ka USA oo aan taageero iyo aqoonsi u fidinno ciyaartooyda aadka u weyn ee kooxda Tennis -ka Qaranka Mareykanka." “Annaga oo ah hudheelkii ugu casrisanaa ee Houston, waxaan rajaynaynaa inaanu siinno ciyaartoyga Tennis -ka USA ee Tennis -ka iyo taageerayaasha waayo -aragnimo soo -dhaweyn leh oo dhab ah oo Houston ah.”
Daris la ah Xarunta Caafimaadka ee Texas ee caanka ka ah magaalada Houston, the Hotel Blossom waxay u jirtaa masaafad socod oo degmada matxafka caanka ah waxaana ku hareeraysan dukaamaysiga, cuntada iyo meelaha madadaalada. Iyadoo la waafajinayo naaneyska Houston oo ah Space Space, Blossom waxay leedahay astaamo naqshadeyn ah oo dayax-gacmeed leh. Iyada oo leh 267 qolal raaxo oo raaxo leh, xarunta raaxada ee lix iyo tobanka ah waxay bixisaa in ka badan 9000 fiit oo ah goob kulan oo dabacsan iyo xarun jirdhis oo casri ah Peloton®. Blossom waxaa lagu daboolay barkad saqafka sare leh oo qurux badan iyo qol jiif oo bixiya aragtiyo aad u ballaaran oo ku saabsan badhtamaha magaalada Houston.
Markii uu jiray, hoteelka Blossom Houston waxaa laga yaabaa inuu si fiican ugu caan baxay dib u bixinta bulshada Houston. Ka sokow bixinta shaqo -siinta dadka maxalliga ah oo leh in ka badan 150 shaqo oo la bixiyay intii uu socday masiibada, lahaanshaha Blossom ayaa sidoo kale bixisay kheyraadkeeda iyo khibraddeeda si ay u caawiso dadka u baahan intii lagu jiray duufaantii jiilaalka ee dhawaanahan waxyeellaysay Texas, sida milkiilaha Charlie Wang shirkadda dhismaha waxyeello u geysatay tuubooyin biyood oo qarxay in ka badan 120 qoys oo deegaanka ah.
Astaanta Huteelka Blossom ayaa lagu soo bandhigi doonaa lebiska Kooxda Miiska Qaranka ee Maraykanka isla markaaba.